ဘာနေရဲ့ အတွေးလေးများ: February 2010
Html လေ့ကျင့်ရေး ဆော့ ဝဲ
HTML ကို www.w3schools.com လိုပဲ မိမိအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက် မရတဲ့ အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ချင်ရင်တော့ ဟော့ဒီ ဆော့ဝဲ လေးကို အသုံးပြုပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ် ဆော့ဝဲတွေက သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ လိုက်စုဆောင်းထားတာပါ ခု ဒီပို့စ်တွေ တင်တာလည်း နီးစပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောချင်တာလည်းပါပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်ဖတ်နေရင်တော့ ကျေနပ်နေတဲ့ သူ ကျနော့အဖို့ အဆင်ပြေပါတယ် .. ဆော့ဝဲလေးက တော့ ကောင်းတယ် ဗျာ လေ့လာချင်ရင်တော့ ဒေါင်းလုတ်ချပြီး သုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ သူ့မှာ ကီးလေးပါ တွဲထားတာဆိုတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
ဆော့ဝဲနေရာက ဒီ 4shared မှာ ယူလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်
Posted by ဘာနေ ... at 3:13 PM
PDF ကနေ Word ကိုပြောင်းချင်ရင်
PDF ကနေ Microsoft Word ဖိုင်ပြောင်းဖို့ ....
ကျနော် အရင်က pdf ဖိုင်တွေကို ပြန်ပြင်ရင် ဘယ်လိုပြင်ရမှန်းမသိဘူးဗျာ အင်တာနက်ထဲ လိုက်ရှာတော့လည်း တွေ့ပါတယ် ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ စိတ်ပျက်ပြီး မရဘူး လုပ်နေတာ
ဖြစ်ချင်တော့ တစ်နေ့က ဖိုင်တစ်ဖိုင်က ပရင့်ထုတ်မရဘူးဗျာ ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး အဲ့ဒါ
လုပ်နေကြပဲ Google ကိုပဲ အားကိုးရတာပေါ့ . ရှာလိုက်တော့ ဘာမှ ဒေါင်းစရာ မလိုဘူးဗျာ
ဝက်ဆိုဒ်ကနေ ပြောင်းပေးသွားတာ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ အီးမေးလ် အကောင့်ကို ထည့်ပေး၇တယ်
သူပြောင်းပြီးသားဖိုင် ပြန်ပို့ပေးဖို့ပေါ့ . အဲ့ဒီနေရာကိုသွားချင်ရင်တော့ www.pdftoword.com ဆိုပြီးအလွယ်တကူ ရိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ် ပြောင်းချင်တဲ့ဖိုင်ကို Browse ကနေ လှမ်းဆွဲယူ ပြီးရင် နောက်အကွက်ထဲမှာ ကိုယ့် အီးမေးလ်ကိုထည့်ပေးလိုက် ပြီးရင်တော့ convert ကိုနှိပ်ပေးလိုက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ...
Posted by ဘာနေ ... at 3:02 PM